एल.बीको नयाँ कृति ‘इन्द्रमायाको देशमा’ प्रकाशित – Gulmiews
एल.बीको नयाँ कृति ‘इन्द्रमायाको देशमा’ प्रकाशित
No comments	अर्जुन खनाल
चितवन, असार १८ । प्रशिद्ध कवि तथा कथाकार एल.बी. क्षेत्रीको नयाँ कथा संग्रह इन्द्रमायाको देशमा प्रकाशित भएको छ । नेपाली जनजीवनका बिबिध पाटाहरुलाई मौलिक तथा कलात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको उक्त कथासंग्रहमा बाइसवटा कथाहरु समावेस छन् ।
चितवनलाई आधार मानेर साहित्य सिर्जना गर्ने साहित्यकार क्षेत्रीका त्रिशंकुको देशमा ( लघुकथा संग्रह, २०६४ ), भीडमा हराएको मान्छे ( कविता संग्रह, २०७१ ) लगायत कृतिहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । चितवनमा कविडांडाको स्थापना गरेर साहित्यिक कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहने एल.वी क्षेत्री चरैवेती साहित्यिक त्रैमासिकको सम्पादक / प्रकाशक हुनुहुन्छ ।
बरिष्ठ समालोचक डा. गोविन्दराज भट्टराइले इन्द्रमायाको देशबारे भन्नुहुन्छ – यसको भाषा अति सुन्दर, धेरै अलंकृत होइन, तर पात्रको परिस्थति अनुसार सबैतिर सलल बग्ने सरल र परिष्कृत छ । त्यस्तै बरिष्ठ समालोचक डा. लक्ष्मण गौतमले भन्नुहुन्छ – इन्द्रमायाको देशमा नामक कृतिमा लेखक कथाकार र लघुकथाकार दुवै रुपमा उपस्थित भएका छन् । इन्द्रमायाको देशमा चरैवेती प्रकाशन चितवनलेप्रकाशित गरेको हो ।
Related Posts	भानुभक्तको सम्मान हुन सकेनः पन्थी...	July 13, 2016	न कोहि बोक्सी हुन्छ, न कोहि हुन्छ धामी...	July 3, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	पति पत्नी एकै साथ पत्रकारिता तर्फ